We Fight We Win. -- " More than Media ": ကချင် လူမျိုးများ အပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲ နေပုံ ကို တွေ့ ရစဉ်
ကချင် လူမျိုးများ အပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲ နေပုံ ကို တွေ့ ရစဉ်
Yes they are Kachin but they do not represent the whole kachin ethnic. the headline should be KIA defending their strong hold. Don't u know that KIA having lesser support from their ppl and it isaSHAME that u dare post such thing even u know urself and current status of Kachin Stare.
SHAME ON YOU...Is that real that u r getting 100 US$ for each post?
ကေအိုင်အေ..ကေအိုင်အိုစစ်သမီးတွေကိုတောင်နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့ဗမာစစ်တပ်ဘာလုပ်ဖို့ လဲ။ရေမရှိတဲ့မြောင်းထဲမှာနှာခေါင်းပိတ်ပြီးသေဖို့ ကောင်းနေပြီ။
အဲလိုလျှောက်မြောင်းမျိုးနဲ့ခံတိုက်လို့ ကတော့ သေချင်းဆိုးနဲ့သေသွားမှာပေါ့။ ဒီပုံက ရဲမေတွေ ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပဲ ခန ခေါ်ပြီး ရိုက်ယူထားတာဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ တကယ်တန်း အဲလို လျှောက်မြောင်းနဲ့ အဲဒီလို ခံစစ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ အဲဒီလို နေရာချထားပုံနဲ့ မသာ ဆယ်လောင်း နှစ်ကျပ်ခွဲဈေးတောင်ပေါက်သွားဦးမယ်။
I am proud of you KIA and Kachin people. you are fighting for yr people who has been colonized by Burma - colonialist for several decades.Carry on K I A.
ဟုတ်ပါတယ်။ KIA ဟာအခုအချိန်မှာကချင်လူမျိုး အားလုံးကိုကိုယ်စားမပြုပါဘူး။ ဥပမာ NDAK အဖွဲ့လို လူမျိုးတွေအတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် KIA ကိုသူ့လူမျိုး အများစုကသူတို့အစိုးရလို့အသိအမှတ်ပြုသတ်မှတ်ထား ကြပါတယ်။KIA မှာစစ်သမီးတွေအများကြီး ရှိပါ တယ်။ သူတို့တွေဟာတကယ်ကိုဘဲစစ်မြေပြင်ကိုသွား ရပါတယ်။ အဲဒီလိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကဘဲ မိမိကိုယ်ကိုခုခံရင်းကိုယ့်လူမျိုးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာပါ။
11 May 2012 at 02:50